सहकारीमा धर्ना दिँदै सदस्यहरू ! | शहरबाट शब्दहरु
« अपरिचित स्वरले पार्यो आपत्त
धन भएर मन नहुनेहरूको धाकै ठूलो »
सहकारीमा धर्ना दिँदै सदस्यहरू !	मंसिर १३, २०६८ अर्थात नोभेम्बर २९, २०११
हिजो कान्तिपुर एफएमबाट प्रसारण हुने भावसंवेगमा फोन लाग्यो । जसरीपनि बोल्छु भन्ने अडान आखिर पुरै भयो । प्रत्यक्ष कविता सुनाए साम्राज्य शिर्षकको । लगभग १२.१० मात्रै सुतेँ ।
सत्य लेखनको बाचा गरेर लेख्न थालेको डायरी एकसाता रोकियो । कारण हो समयानुकुल परिस्थिती नमिल्नु र अल्छिपना । यो सातामा निकै घटना/परिघटना/भेटघाट र उतारचढावका पलहरू बितेका छन् । वरिष्ठ चलचित्रकर्मी तथा साहित्यकार चेतन कार्की र प्रकास साय्मीसँग भेटघाट छँदैछ । कान्तिपुर एफएमका साथी र उज्यालोका पत्रकार मित्रसँग साँझ झण्डै दुईघण्टा भलाकुसारी । गुरू राजेन्द्र दाहालसँग आत्मिय सम्वाद ।
मिठा पलहरूसँगै नमिठो घटनामध्ये टिकाराम गोलेको बुधबार भएको दुर्घटना । अघिल्लो दिन ग्वार्काेमा टाटा गाडीबाट मारिएका सुजन श्रेष्ठको घटना । जसका कारण लगनखेल पुरै ठप्प भए । कालेश्वरका गोलेलाई मिनीबसको ठक्करपछि व्याक गरेर मारेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । त्यो दिन दिनभर रिपोर्टिङमा व्यस्त भए ।
आजपनि केही नलेखिकन सुत्ने तरखर गरिरहेको थिए । मन व्याकुल भयो । छटपटी लाग्यो । यसको औषधी भन्नुनै लेख्नु हो । अनि लेख्न बसे । अर्का अचम्मको कुरो त म दुईदिन पुरै बिसच्चो बने । त्यो दिन न कसैको फोन उठाएँ, न की फेसबुकमा कुनै कुराको अपडेट नै गरे ।
अनि बल्ल थाहा पाएँ, जे गर्नुछ । जस्तो गर्नै हो मात्रै आफ्नै लागि । तपाईले वास्ता र चासो गरेपनि धेरैले तपाईको ख्याल र चासो राख्दैन । यो सत्य हो जीवनको । अनि सत्य हो समाजको ।
हिजो एउटा दुखद खबर । आर्थिक पत्रकार विजयबाबु खत्री दुर्घटनामा निधन भए । हो, मेरो पत्रकारिता यात्रामा खत्रीलाई र उनका समाचारलाई नजिकबाट बुझ्ने र पढ्ने मौका पाएको छु । आखिर ढिलोचाँडो मात्रै हो यो जीवनको अनन्त यात्रामा सबै लाग्नैपर्छ । कोही हिजो गए । कोही आज लागे र भोली मेरो प्रस्थान पक्का छ । अनित्य संसारको कठोर नियम हो यो ।
हिजो सोमबारपनि निकै मित्रहरूसँग भेट भयो । नयाँ कार्ययोजना छलफलका लागि टिकाराम प्रधान र पूर्णसिह बराईलीसँग घण्टौ बैठक भयो ।
घरमा सुनिता र मेरो अलिकति परालमा आगो लागेको अवस्था छ । आजैपनि बिहान अलिकति आगो उग्र हुनपुग्यो । तरपनि हामीबिचको आक्रोशको आगो साँच्चिकै परालमा लागेको जस्तै हो । आखिर माया नै हो क्यारे । खाना खान पर्खिने र मिठो चिया बनाएर खुवाउने । वाह क्या बात ।
आज दिनभर घरमै बसे । पुराना लेख र तस्वीरहरूको संग्रह खोजतलाश भयो । फेरि एकपटक पुराना दृश्यहरू र समाचार लेखहरू ताजा भए । अनि दुई वटा पोर्टबल हार्डडिस्कका पुरै संग्रह हेरियो । शब्द लेखिरहँदा हिजोअस्तिका भेटघाट स्मरणमा आएका छन् । ६ महिनाअघि विवाह गरेका अर्पण तामाङ भेट भयो । मित्र प्रशान्तका विषयमा निकै कुरा भयो । कति भलादमी छ प्रशान्त । आफ्ना समस्याका केहीपनि कण कसैलाई बाँड्ेनन् । म छक्क परे ।
हिजो अफिसमा केही घण्टा बसे । अफिसका महिला कर्मचारीको परीक्षाका कारण बिदा लिए र बाहिर जाने प्रक्रिया बारे जानकारी गराएपछि हिसाबकिताब गरिदिए । अहिले त्यो पद खाली नै छ । पत्रिकाको कार्यालय नजिकैको सुकुन्दा सहकारीमा सदस्यका रकम दिएनन् भनेर धर्ना बसेका छन.् । सदस्यका अनुसार आफ्नै पैसा लिन आउँदा समेत रकम नदिएकोमा आक्रोसित छन् । सञ्चालक सम्पर्कविहिन भयो भन्ने आरोप छ । आज पोखराबाट काशी जोशी आउनुभयो । तुलसी आँटीको उपचार असफल भएपछि भेटघाटको लागि आउनुभएको हो । यता फेसबुकबाट दुई अपरिचित अनुसारसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको मौका मिल्यो । अनि आज होस्टेलकी बहिनीको आत्मिय मित्र परदेशबाट आइपुगे । हामीलाई परिचित गराए ।
शब्द लेखिरहँदा सबैले दुई निद्रा पु¥याइसके । के छुटे के छुटे । निरन्तरताको वाचा आफैसँग गरेर अहिले बिदा ।
This entry was posted on नोभेम्बर 29, 2011 at 5:53 अपराह्न and is filed under दैनिकी, म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: सहकारी	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.